12ttnnaing blogspot.com: ကင်ဆာအတွက်ဒူးရင်းသြဇာ
ခေါင်းစဉ်ခွဲ : ကျန်းမာရေး
အဖွဲ့ဝင်2ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
< နောက်ဘလော့ပို့(စ်) စီသို့
ဗမာလူမျိုး မှတ်ချက်ရေးသားသူ ကိုသန့်ဇင် သည် လွန်ခဲ့သော 13 မိနစ် ကမှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။
ဗမာလူမျိုး မှတ်ချက်ရေးသားသူ aungzin သည် လွန်ခဲ့သော2နှာရီ ကမှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားလာအောင် စတင်ဖော်ထုတ် ဆော်သြ ခဲ့သူကတော့ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး
အရှင် တိုမီဇာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ ဓါတ်စာဖျော်ရည်ကတော့ ``အာလူးစိမ်း`` ဖျော်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အဆိုတွေက `` အာလူးကို ဥရောပတိုက်သားတွေက တစ်ချိန်တုန်းက
မွန်လူမျိုး မှတ်ချက်ရေးသားသူ David Lwin သည် လွန်ခဲ့သော2နှာရီ ကမှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။
Yes..it is true.its hard to find in Yangon,you can find it in Irrawaddy delta.not only cured cancer.its good for every thing.people in america and England are drinking juice from this fruit and its called GRAVIOLA.I am arriving Burma on 5th November.my email is davidlwin258london@gmail.com and contact me only with cancer relate subject.I have tested and it is good for cancer.good luck.
ကရင်လူမျိုး မှတ်ချက်ရေးသားသူ thart wah သည် လွန်ခဲ့သော3နှာရီ ကမှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။
သောက်နည်းလေးလဲပြောပြရင်ကောင်းမယ်။ ဒူးရင်းသြဇာကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲဆိုတာကိုပေါ့ အချို့ဆိုဒါတွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်လျှက်
ဗမာလူမျိုး မှတ်ချက်ရေးသားသူ Myint Myint Zin သည် လွန်ခဲ့သော3နှာရီ ကမှတ်ချက်ရေးခဲ့သည်။
အ၀င်စာတိုက်ပုံး (2 )
★♥ZIN NYEIN OO★♥ created this Ning Network.
ကို ၇ှင်လွမ်းမယ် မှထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။21
ENO - Koe Yout Myauk Chit Thu-1
ကို ၇ှင်လွမ်းမယ် မှထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 1 0
အဖွဲ့ဝင် 338 ဦး
own flashsong group
အဖွဲ့ဝင် 77 ဦး
Gtalk ၊ VZO နဲ့faceboo…
အဖွဲ့ဝင် 219 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 189 ဦး
None Access Denied @ အို…
အဖွဲ့ဝင် 48 ဦး
Justin Htut လက်ဆောင်ပေးမယ်
Khant Thu လက်ဆောင်ပေးမယ်
Khon Main Han Pha လက်ဆောင်ပေးမယ်
ko bagan လက်ဆောင်ပေးမယ်
kyaw ko ko လက်ဆောင်ပေးမယ်
Moe Kaung လက်ဆောင်ပေးမယ်
Moe Yan Myint Htoo လက်ဆောင်ပေးမယ်
Nyi ShinThant လက်ဆောင်ပေးမယ်
Seven Magic လက်ဆောင်ပေးမယ်
than naing htay လက်ဆောင်ပေးမယ်
Posted by ကောင်းကင်ပြာ at 07:28